Akhriskii Kal Hore: 2017 | Maydhane
~ Murti & Wisdom والحكمة
Akhriskii Kal Hore: 2017
Posted by Maydhane in Falgalka Buugta
Akhris, Akhriskii Kal Hore
Saddexdii sanno ee ugu dambeeyey (2014, 2015, 2016) ayaan mid kasta soo qorey bilowgii sannadka cusub qaar ka mid ah buugtii aan akhriyey kalkii hore. Kalkan waan la raagey. Saaxiibo dhaw oo saaxiibtinimadayada ay weheliso akhris jacaylku dib u dhacaas way ka xumaadeen, wayna i dareensiiyeen. Mid ka mid ahi wuxuu igula kaftamay, “Durba sawdiga la qabsaday waxsoosaar xumadii dadkeena haysatay!” Saaxiib kale wuxuu u dhigey saluugiisa qaab su’aalaysan, “Mee dee akhriskii kal hore?” Waxase arrinku soo afjarmay markii saaxiib kale ii weydiiyey qaabkan oo kale: “Akhriskii kal hore haddii aan sugayo ka warran saaxiib?”
Maldahista hadalka iyo duurxulkiisa waxaad moodaa saaxiibaday inay siday u kala dambeeyaan ugu kala sarreeyaan. Malaha heerarkaasba waan u wada baahnaa si aan ugu baraarugo. Malaha intubana dhinacyo muhiim ah ayey iga taabanayeen.
Kal hore wuxuu ii ahaa mid kala guur ah. Waxaan dib isugu habaynayey sidii dalka hooyo oo aan muddo ka maqnaa ula jaan qaadi lahaa, kaalinta kartidaydu gaadhsiisan tahayna uga qaadan lahaa. Intaan hawshaas ku fooganaa, waxa ku dayacmay akhriskii. Waxaan akhriyey intii ugu yarayd tan iyo intaan jaamacadda ka qalinjebiyey.
Markaan dib u eego waxaan arkaa sababaha akhriskayga yareeyey inay isugu soo ururto hal sabab: inaanan aqoonsan kaalinta meesha aan wax ku akhriyeyaa ku leedahay akhriska. Intaan dalka ka maqnaa, marar badan waxaan wax ku dhex akhrisan jirey meelo dadku ku badan yihiin sida makhaayadaha, gaadiidka dadweynaha dhexdiisa iwm. Dhaqanka yaal waa in qofka loo daayo hawshiisa haddii lagu arko isagoo wax ku foogan.
Nasiib ama nasiibdarro, imika suurtagal ma aha inaad wax ku akhrisato meel dadku ku badan yihiin. Sababta ugu weyni waa iyadoo dhaqanka yaal halkani yahay mid aan u daynayn qofka waxa uu ku foogan yahay. Tani iskeed dhib iyo dheef midna uguma aha akhriska. Haddiise aanad ku xisaabtamin, waa markaa marka ay dhib kugu keeni karaysaa.
Xisaabtamid la’aani waa tii i heshay. In badan ayaan u walwaalay buug aan rabay in aan ku akhristo meel la isugu yimaado, weliba, kaaga darane, dadka badankooda aan aqaan. Bogna anigoon ka akhrisan ayaan kala soo hoyday.
Arrin waliba xal ayuu leeyahay. Sida aad ku xallin karto arrintani waa in aad akhriskaaga, ama hawlaha qoraalka iyo fiirsiga badan u baahan, qabsatid wakhti aanay badnayn dadka kaa dhexgeli kara ama aad ku qabsatid meel aanay dadka badankoodu iman karin.
Wakhtiyada ugu wanaagsan ee qofku wax qabsan karo waxay ku xidhan yihiin duruufaha qofka. Hase yeeshee, inta badan waxa ka mid ah xilliga hore subixii inta u dhaxaysa salaada subax ilaa 10ka subaxnimo iyo inta u dhaxaysa duhurka iyo casarka. Dadka qaar waxa u wanaagsan oo kale fiidka hore dabadeedna waxay la caweeyaan saaxiibadooda soojeedka xilliga dambe ku gaadha, halka kuwo kalena qoysas leeyihiin oo ay guriga hore u tegaan sidaas darteedna loo qaatay inay xilliga dambe hawshooda ka dhigtaan.
Meelaha qofku ku shaqaysan karo sidoo kale waxay ku xidhan yihiin duruufaha qofka. Gurigu waa meelaha ugu wanaagsan laakiin laga yaabe in haweenku ku dhib galaan maadaama baylaho badan uga muuqanayaan markaaba. Xafiisyada ka sokow, waxa kale ee jira meelo badan oo qofku wax ku qori karo ama akhrisan karo, sida goobaha makhaayadaha. In aan aad lagaaga aqoon goobtu waxay kuu suurtogelinaysaa in inta lagaa dhexgelayaa yaraato.
Isku dhafka meesha iyo wakhtigu waxay kuu suurtogelinayaan in aad saamayn badan ku yeelatid deganaanshaha aad helayso si aad wax u akhrido ama u qorto. Meel markeeda hore qalo yar haddii aad tegto wakhti lagu yar yahay, waa faa’iido libinlaaban.
U soo deg dulucda qoraalkan. Haatan iyo qaar ka mid ah buugta aan akhriyey:
Leadership of Muhammad by John Adair (Hoggaamintii Maxamed NNKH): Waa buug kooban laakiin xambaarsan aqoon luxdan oo ku saabsan xeeldheeridda hoggaamintii Rasuulka (NNKH). Adheer waa xeeldheere aqoonta hoggaaminta muddo dheer ku soo jirey isla markaana buug badan ka qoray. Buuggiisan Hoggaaminta [Nebi] Maxamed (NNKH) waxa uu ka hadlayaa falsafaddii dadjirka lahayd ee nebiga, tabihii uu adeegsan jirey, iyo sida waayihii uu ku soo korey ay ula falgaleen noloshiisa. Mid ka mid hawraaraha ugu qotada dheer ee laga soo jeemi karo waa: “We know now that someone in a leadership role has three core and overlapping functions: to achieve the tasks, to hold a group together as a unity, and to meet individual needs.” Macnaheedu waxa uu u dhaw yahay: “Hadda waxaan ogsoonnahay ciddii door hoggaamineed lehba hawlaha hor yaalaa inay yihiin saddex waaweyn isla markaana isa saameeya: in uu hawsha fuliyo, in uu kooxda midnimadeeda ilaasho, iyo inuu daboolo baahiyaha gaar ahaaneed.”
Black Man’s Burden: Africa and the Curse of the Nation-States by Basil Davidson (Culaabta Ninka Madaw: Afrika iyo Masiibada Qaran-Qawmiyadeedka): Buugani wuxuu qaadaa dhigayaa sida taariikhdii gumaysigu ay u tahay culaab saaran duudka qofka madow. Ruudhi Kiblin (Rudy Kipling) ayaa dhammaadkii qarnigii 19aad tiriyey gabay uu ku dardargelinayey xooggii Maraykan in uu qabsado, oo uu gumaysto, Filibiin si loo faafiyo imbiridooriyadda Maraykan. Gabaygaas waxa la odhan jirey The White Man’s Burden oo u dhiganta “Culaabta Ninka Cad.” Waa gabay ka dhigaya in dedaalkii gumaysigu ahaa mid lagu “ilbixinayo” kuwa aan cadayn, sidaas darteedna culaab ku ah ninka cad. Doodda buugani waxay dhanka kale u rogtay in wixii ugu darnaa ee uu gumaysigu yeelay Afrika ay tahay in uu kala gooyey qulqulatada taariikhda dalalkii Afrika. Wuxuu gumaysigu dhisay, waa sida uu ku doodayo buuguye, qayb bulshada ka mid ah oo uu u diyaarshay in ay la wareegaan dawladnimada uu u keenay isagoo meesha ka saaray dadkii iyo nidaamkii talin jirey gumaysiga ka hor. Digniinta adag ee ku jirta buugu waa in aan dal reer Afrika ahi gaadhi karin horumar macno leh intanidaamka laga dhaxlay gumaysigu kala qoqobtay taariikhdiisa.
Cockroach by Rawi Hagi (Baranbaro): Waa sheeko male-awaal ah oo ka hadlaysa nin kasoo barakacay dalkiisii imikana degay Moontiriyaal (Montreal). Jilaha sheekadu wuxuu isku dayey inuu is dilo, wayse u suuroobi wayday, markii dambena waxa loo qoray dabiib (therapy). Sheekadu waxay u dhaxaysaa inta la dabiibayo, xusuusihii dalkiisa, iyo waxyaabaha uu kala kulmayo noloshiisa Moontiriyaal ee inta badan ku wareegaysa meelaha ay isugu yimaadaan kuwa soo barakacay. Baranbaradu waxay u tahay humaag uu ku sawiro noloshiisa: siday u tahay mid aan ka liidata nolosha ay maraan kuwa dalka u dhashay; siday ay faduuli tahay ee reeraha dadka kale iyo dalalkoodaba ay iskaga gelayso; siday u keni adag tahay ee aan dhayal lagu joojin karin. Waa buug muuqaal la yaab badan ka bixinaya nolosha dadka dalalkoodii ka soo barakacay ee xididadooda ku taagaya dalal cusub – muuqaal aad uga kakan ka sawira xumaanta ama wanaaga, dacarta ama dooga.
Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman (Fikir: Degdeg iyo Qunyar): Halkani, Dhaaniyeel, wuxuu inoogu kala soorayaa qaababka aan u fikirno laba nooc: mid dhakhso u dhaca oo inta badan caadifad wata, iyo mid qunyar ah oo inta badan caqli ku dhisan. Wuxuu sawirayaa in go’aamada nolosheena soo maraa labadaba u baahan yihiin. Waxa kale ee uu suuraynaa sida mid waliba loogu kaadsoomo in si haboon loogu adeegsado kolba go’aanka ku horyaal. Intii wixii ka hooseeyaa waa tafaasiil noocyada eexaha ee qofka saameeya go’aamadiisa, sida go’aanada uu qaato, iyo sheekooyin badan oo ku hodan inay tusaale ku muujiyaan waxa qoraagu u jeedo. Xigasho kooban: “You are more likely to learn something by finding surprises in your own behavior than by hearing surprising facts about people in general.” Tani waxay u dhigantaa, “Waxaad uga dhaw dahay inaad waxka korodhsato in aad la yaabka dhaqankaaga ku jira hesho intii aad raadsan lahayd la yaabka nolosha dadka ku jira guud ahaan.”
The Good Life Handbook by Epectititus (Buugyaraha Nolosha Wanaagsan): Sida magaciisa ka muuqata (handbook ama buugyare) waa mid kooban oo si fudud qofku gacanta ugu qaadan karo. Buugani wuxuu ka hadlayaa falsafaddii nololeed ee Ibegtiitas. Ibegtiitas wuxuu ahaa nin ay soo martey nolol adag. Jawaabtii uu ka bixiyeyna waxay ahayd qaadashada falsafadda stoicism. Falsafaddani waa mid ku qotonta in aan la is raacraacin gedgedoonka waayaha nolosha ee qofku baaqbaaqo dhaqankiisa shaqsi ahaaneed oo uu ku suntanaado, duruuftuu doono ha ku jiree, wanaag isagoon cidna ka rabin in ay magac ku siiyaan. Bal u fiirso murtida ka muuqata odhaahdan oo kale: “Events don’t disturb people; the way they think about events does.” oo u dhiganta “Dadka waxa qasaa ma aha waxa dhacay ee waa siday u qaataan.”
Sceptical Essays by Bertrand Russel (Curisyo Shaki): Scepticism ama skepticism waa aragti falsafadeed oo ka shidaal qaadanaysa sida ay u adag tahay in yaqiin uu qofku ka gaadho aqoonta. Waa aragti ka shakisan saxnimada aqoonta maadaama aaladaha lagu goobayo laftoodu xadidan yihiin. Halkan waxa ku urursan curisyo midba dhinac ka eegayo nolosha – kaga bilow qiimaha ama waxtarka shakiga, ilaa sayniska iyo siyaasadda, ilaa laga gaadho halista ay yeelan karto dagaalo ka dhasha kala duwanaanshaha caqiidooyinka. Wuxuu Ruusal ka bilaabayaa sheekadiisa, “These propositions may seem mild, yet, if accepted, they would absolutely revolutionise human life” oo u dhiganta, “Waxay u muuqdaan soojeedimo aan qoto dheerayn, laakiin haddii la qaato, waxay nolosha aadamiga ku keenayaan isbeddel sal ballaadhan.”
The Negotiation Book: Practical Steps to Becoming a Master Negotiator by Nicole Soames (Buuga Gorgortanka: Tallaabooyin Cad oo aad u Qaadi Karto si aad ugu Xeeldheerato Gorgortanka): Sida ka muuqata buugan waa buug kooban, u badan talooyin iyo tilmaamo ku saabsan si aad kartidaada gorgortan kor ugu qaado. Waxaad kala kulmaysaa talooyin aad markaaba noloshaada u adeegsan karto. Xujada gorgortanka ee buugan waa in gorgortan kasta uu ka bilowdo naftaada. Inta badan, sida buugu muujinayo, waxay dadka gorgortankooda ka bilaabaan iyagoo isasii qanciyey dabadeedna soo bandhiga hindise qofka kale si fudud u qaadan karo – sidaas darteedna aayar la qaato ama weliba hoos looga sii dhigo halkii uu marka hore rabay. Tani waxay si dadban u qiraysaa siday u adagtahay jaritaanka sicirka shay, taas darteedna laga dhigto qiyaas halka uu diidi karo qofka loo bandhigayaayi.
Ugu dambayn, Ingiriiska ayaa ku maahmaaha, “Better be late than never,” oo u dhiganta, “Intii aad ka wada maqnaan lahayd, adigoo daaha uun baa la qaatay.” Waa kuwan buugtii aan akhriyey kal hore. Adna? Intaa horteedna, akhris wacan…
1 thought on “Akhriskii Kal Hore: 2017”
Pingback: Akhriskii Kal Hore: 2018 | Maydhane
Maidhane ~ Wisdom & Murti
Akhriska Kalkan: 2019
Falgalka Buugta (12)
Maanso; Poetry (9)
Sheeko Male-Awaal Ah; Fiction Stories (3)
Social Animal (19)
Somaliland Local Governments
Feedh Qalloocan Mise Bulsho Qalloocan?
Shawr: Tol Waa Tolane
Meherka Masjid lagu Qabto Maxaa laga Wadaa?
Akhriskii Kal Hore: 2015
Bakayle Iyo Diin